Qarax xoogan oo lala eegtay Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho oo shir uga socday xildhibaanda iyo Siyaaasiyiintii ka falaagowday Somaliland | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Qarax xoogan oo lala eegtay Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho oo shir uga socday xildhibaanda iyo Siyaaasiyiintii ka falaagowday Somaliland
Kooxda Alshabaab ayaa sheegatay qarax xoogan oo ay la beegsadeen Hotelka SYL ee ka soo horjeedka Madaxtooyada Somaliya. Qaraxan ayaa waxay ku fuliyeen baabuur walxaha qarax oo xawli aad u sareeya ku socday kaasi oo ku qarxay meel u dhaxaysa hotelka iyo madaxtooyada ka dib markii ciidankii madaxtooyadu ay rasaas ooda kaga qaadeen intii aanu qarxin. Qaraxan ayaa geystay khasaare badan iyadoo ay ilaa hada dhimashadu marayso 25 qof iyo 43 qof oo dhawacyo kala duwan qaba.
Waxa la sheegay inuu shir uga socday kooxda ka soo jeeda Somaliland ee xildhbaanada ka ah somaliya iyo wasiiro iyo siyasiyiinta ka soo jeeda Somaliland. Waxayna dhawacyo fududi soo gaadheen xubno badan oo ka mid ah siyasiyiintii ka soo jeeday Somaliland ee shirku uga socday hotelk.